Ningbo Albert Novosino (Ningbo Albert Shiinaha) waa casri ah, teknoolojiyad sare iyo shirkad cusub oo xafiiska madaxa ku yaal Germany. Waxaan leenahay 180 oo shaqaale ee Albert Shiinaha, iyadoo 8 injineerada for design iyo horumarinta waxyaabaha cusub. In kasta oo suuqa segmented, waxaan wakiil tayada sareeya.
Albert Group waa shirkad globalizational oo leh qalabka ee Germany, USA, China iyo Poland. kooxda injineer Global hubisaa falcelin degdeg ah oo tayo sare leh mashaariic cusub oo xal macaamiisha. saarka Global ay hubisaa in gaarsiinta iyo adeeg degdeg ah oo hufan.
Iyada oo sumcad gaar ah tayada, hal-abuurnimo wax soo saarka iyo heer farsamo, waxaana la soo saaro kala duwan ee wax soo saarka fasalka caafimaadka ee caafimaadka, daryeelka caafimaadka ee gaarka ah iyo suuqa warshadaha oo muddo ka badan 30 sano. ka our alaabta suuqa guud ee caadiga ah laga reebo, waxaan sidoo kale ay soo saaraan waxyaabaha caadada goobaha ee Europe, Asia iyo North America. In ka badan labaatan sano ah, macaamiisheena u imid inaan qiimeeyo heerka dabacsanaan iyo tayo-sare ee Albert Warshadaha Shiinaha iyo Group Albert ah.
Waxaan leenahay processing aad u xoog badan oo ballaadhan si ay u tayo sareeya suuqa la kulmaan.
wax taaj oo kale -Rotation
wax taaj oo kale -Dip
wax taaj oo kale -Compression
wax taaj oo kale -Injection
Custom Design iyo Horumarinta
Albert kooxda xallinta qiimaha macaamiisha. All sano ah, waxaan innovate alaabta gaar ah oo xal loogu talagalay macaamiisha our. Caalamiyeynta aynu fahmaan baahida dhabta ah.
Riix halkan si aad wax dheeraad ah oo ku saabsan Custom Solutions bartaan.